Ubuhlungu obunemivimbo kanye neziphuzo zijwayele wonke umuntu. Thola izidakamizwa ezifanele ukwelapha ngisho nezisho ezinjalo ezilula akuzona njalo. Namuhla, odokotela abaningi batusa iziguli zabo ukhilimu "Impumelelo" - izidakamizwa eziyingqayizivele ezisekelwe ezikhwameni ezihlukahlukene zezitshalo.
Inzuzo yalo enkulu yiyo yonke indawo. Umkhiqizo awusetshenziselwa ukwelashwa kwesistimu ye-musculoskelet, kodwa futhi ngezinkinga zezinzwa, ukubandayo nezinye izifo eziningi.
Iyini ukhilimu "Impumelelo" yamalungu, imisipha nokwelashwa kwezifo ze-ENT? Ngokusho kwabathuthukisi, ngaphezu kwesisekelo se-cream, umkhiqizo uqukethe izingxenye ezilandelayo eziwusizo zezitshalo ezivela kulo:
Ibhotela le-cocoa inikeza ukudla okunomsoco kanye ne-hydration;
Ukukhipha amafutha we-propolis kunciphisa izinqubo zokuvuvukala, kunikeza i-anesthesia yendawo, ikhuthaza ukuphefumula kokuphefumula;
I-Juniper ikhiphe - i-antiseptic, ikhulula ubuhlungu, isuse ubuthi;
Ukukhishwa kwe-ginger kubulala amagciwane, kunikeza ithoni evamile yomzimba, kukhuthaza ukuphulukiswa kwamanxeba;
I-Menthol ithokoza, ipholile, ithuthukisa ukujikeleza kwegazi lendawo;
Ukukhishwa kwe-pepper obomvu kuvuselela imisipha, izinqubo zokushintshanisa zethonya elihle.
Kumaphi amacala okunconywa ukuthi asebenzise "Impumelelo" (ukhilimu)? Ubufakazi balesi siguli buqinisekisa izibonakaliso ezimenyezelwe zomuthi. Ngakho, ikhambi lisetshenziselwa ukwelapha izifo:
Uhlelo lwe-musculoskeletal (olungapheli noma lwesikhashana, olubangelwa izivunguvungu noma iziphuzo);
Esimweni ngasinye, kukhona uhlelo lokusebenza. Izincomo ezijwayelekile zisho ukusetshenziswa komkhiqizo kuphela ngaphandle, cishe izikhathi ezingu-2-3 ngosuku.
Kumele kuqashelwe ukuthi ukwelashwa okwesikhashana ngesikhathi somgogodla kubaluleke kakhulu kulo lonke uhlobo lomzimba. Ngendawo engalungile yama-vertebrae, i-asthma, izifo zegazi, ukuphazamisa, kanye nezinqubo ze-pathological in progress progress digestive and worsen.
Leli phepha lisetshenziswe ngempumelelo ngabagijimi kanye nabantu abanokuzikhandla okukhulu ekuvuseleleni isimo semisipha. Ithinta ngokujulile izitho zangaphakathi kanye nama-vertebrae ngokusebenzisa isidumbu, sinomphumela wokuvimbela futhi wokuphefumula, isusa ukukhukhumeza, ukunqanda amandla nokucindezeleka.
I-"Effectum" ye-Cream: imfundo
Okulandelayo, cabangela imithetho yokusebenzisa lesi sidakamizwa.
Ngezivunguvungu kanye ne-sprains - endaweni yenkinga (akuvunyelwe ukuvula amanxeba).
Nge-radiculitis nezinye izifo zamagcekeni angaphezulu - imisipha yendawo yenkinga, isifuba (ngaphandle kwale ndawo yenhliziyo).
Nge-arthrosis - kumajoyini athintekile.
Ngemuva kwesifo - ezindaweni ezilimazekile, ezikhubazekile zomzimba (ngaphandle kwendawo yenhliziyo).
Lapho u-otitis nesinusitis - emaphikweni emphunjini, kanye nendawo yentamo kanye ne-collar.
Nge-bronchitis - indawo yekhola yomlomo wesibeletho kanye ne-sternum.
Kusetshenziswa ukhilimu ongakanani? Ngokweziqondiso, isigamu se-isipuni sikwanele ukucubungula indawo eyodwa. Ukubunjwa kusetshenziselwa inkambo yenyanga eyodwa, kule nkathi uzodinga ngamaphakethe amane anesisindo sama-gramu angu-75. Izinguquko zokuqala ezibonakalayo ziphawulwe ngemuva kwezinsuku ezingu-14.
Abasebenzisi abajwayelekile bayabona kanjani "Impumelelo" (ukhilimu)? Ukubuyekeza komkhiqizo kuningi kunamathuba. Iziguli ziphawula lezi zinzuzo zomkhiqizo ezilandelayo:
Ukusebenza kanye nekhwalithi;
Ukwakhiwa kwemvelo nokuphephile.
Ngesikhathi esifanayo, abaningi bakholelwa ukuthi lesi sidakamizwa asikwazi ukusebenza ngesikhathi esisodwa futhi siletha izinguquko ezinhle kuphela ngokusetshenziswa okuyinkimbinkimbi. Kumele kuqashelwe ukuthi imibono yabachwepheshe kanye nabantu abanolwazi nayo ifakazela izinga eliphakeme lemikhiqizo "Impumelelo" (ukhilimu). Ukubuyekezwa kodokotela kuqukethe ulwazi ukuthi ikhambi livame ukushiwo njengengxenye yokwelapha okuyinkimbinkimbi ekwelapheni izifo ezihlukahlukene.
Kubiza malini ukuthi i- "Effektum" (ukhilimu)? Intengo yomkhiqizo i-ruble engama 300 kuya ku-600 ayi-75 amagremu, konke kuxhomeke endaweni yokuthenga. Njengoba kunikezwe ukuthi kuzoba nezifundo ezine-tubes okungenani, izindleko zokwelashwa ekugcineni zingabuka ku-1200 kuya kuma-2500 ama-ruble ayizinkulungwane.
I-Cream "Effektum", njenganoma imuphi omunye umkhiqizo wezokwelapha, inokuphikisana okuphelele nokulingana okuzoyisebenzisa. Ngokuyinhloko akukhuthazwa ukuba uyisebenzise ngokungahambisani nomuntu nganoma yisiphi isici ekubunjweni. Futhi, ukhilimu akufanele usetshenziswe kunoma yiziphi izinambuzane ezinamaqanda.
Uhlu lwezingqinamba ezihambisanayo luyamangalisa kakhulu. Ihlanganisa:
Isimo saseFrivri (isiteji esicacile);
Isifo sofuba (ifomu evulekile);
I-pathologies ye-gland yegciwane;
Izicubu ezinonya futhi ezinobungozi.
Ukhilimu awusetshenziselwa imifino kanye nezinye izinhlobo ezifanayo, kodwa zingasetshenziswa ukuphatha izindawo ezinempilo zomzimba.
Kwezinye izimo, ukhilimu "Impumelelo" ingabangela imiphumela emibi kanye nezinkinga zesikhashana. Ngokujwayelekile lokhu kubangelwa ukungezwani komzimba ezingxenyeni ezakhiweni. Uma kwenzeka ukusabela okunjalo okungalungile kuvela ekusebenziseni kwayo, kubalulekile ukuphawula. Imiphumela emibi ibonakala ngesimo sokuqhaqhazela, ukuhlaziya, ukuguqulwa kwesikhumba.
Ukuze unciphise izingozi, kunconywa ukuqhuba ukuhlolwa kokuqala kokuphendula. Zifakwe ekusetshenzisweni kwesamba esincane sokhilimu esikhumbeni endaweni yekhanda noma ukugoba kwesigqoko. Uma imiphumela engathandeki ingenzeki ngaphakathi kwamahora angu-9-12, ukubunjwa kungasetshenziswa ngokuphepha futhi ngenani elikhudlwana.
Ukuze ugweme izingozi ezingenzeka, ukusetshenziswa kokubunjwa kunconywa ukuba kuhanjiswe nomuthi wezokwelapha.
Imigomo Yesevisi Yonke
I-Cream "I-Effektum" inomphelo ohlala isikhathi eside. Sebenzisa umkhiqizo iminyaka engaba ngu-2 kusukela ngesikhathi esenziwe. Izimo zokugcina zibuye zisebenziseke kakhulu: kubalulekile ukuhambisana nombuso wokushisa ophakathi kuka-0 kuya ku-25 degrees Celsius, futhi kunconywa ukuba ugweme ukukhanya kwelanga.
Ekuphetheni, ngithanda ukuphinda ngikhulume ngezidingo kanye nezidakamizwa zomuthi "Effektum" (ukhilimu). Inani lemithi liphakeme kakhulu, kodwa liphumelelayo, linenani eliphansi lokuphikisana futhi cishe alubanga izinkinga. Kodwa-ke, kufanele usacabangele imiyalelo yokusetshenziswa kwayo ukuze ugweme imiphumela engathandeki.
Kungani kufanelekile ukusebenzisa i- "Impumelelo" (ukhilimu)? Ukubuyekezwa kodokotela nabasebenzisi abavamile yibufakazi obuhle bokusebenza komuthi. Gubungula zonke izinzuzo nezindleko, bese wenza isinqumo esilinganisiwe mayelana nokuthenga nokusebenzisa i-compound.
Indlela ukukhubaza isofthiwe unqulo wesi arab "windose 7": isixazululo esilula zonke software yokuvikela
A ezihlukahlukene puzzle emhlabathini, utshani kanye strawberry